Etazonia, Britain, France, Germany ary firenena hafa nanatrika ny G7 tamin'ny sabotsy dia nahavita fifanarahana lehibe hanala vola bebe kokoa amin'ireo orinasa marobe toa ny GAFAM ary hampihena ny fandrosoan'izy ireo hamindra ny tombom-bidin'izy ireo amin'ireo seranan-tsambo kely any ivelany. TAXATION TIME Fitsipika momba ny hetra manerantany ...
Fahazoan-dàlana Crypto-Exchange any Estonia. Ireto misy fepetra vaovao hahazoana ny fahazoan-dàlana Crypto-Exchange, Wallet Manager. Mitady fampahalalana momba ny fepetra hahazoana fahazoan-dàlana Crypto-Exchange ianao na Wallet Manager na Lisansa E-Wallet any Estonia. Ny FiduLink.com dia nanohana hatrany ny mpanjifany tamin'ny fiezahana hahazo fahazoan-dàlana ara-bola na hafa ...
The Marketplace-FiduLink.com. 100% Mobile version! Mametraka maimaim-poana! Mila serivisy bebe kokoa aza ianao! Hafainganana kokoa aza? Mbola mora kokoa aza amin'ny dingana ataonao mba hamoronana orinasa iray. Hita izao ao amin'ny motera fikarohana ao amin'ny Google, Yahoo, Bing… Andramo ny www.mobile-fidulink.com. Mobile.Fidulink.com mamela ny mpampiasa ...
E Mahita Partner “FiduLink.com” Vaovao! Vaovao io! Jereo ny fanamarinana momba ny maha-izy azy sy ny vahaolana sonia nomerika www.IDST–WORLD.com. Ao anatin'ny fiarovana ny serivisy an-tserasera FIDULINK.com dia nanangana fiaraha-miasa amin'ny sehatra www.IDST–WORLD.com izahay. Hatramin'ny taona 2020 dia ny krizy ara-pahasalamana miantraika amin'ny planeta ...
Ity misy latabatra iray momba ny demokrasia an-keriny firenena isam-pirenena izay afaka manampy anao amin'ny safidinao amin'ny fananganana ny orinasanao, ny sampana na ny zanakao manerantany. Ity index demaokrasia ity, amin'ny 10, dia ahafahana manavaka sokajin'olona 4: demaokrasia feno, izay misy index lehibe kokoa noho ny 8; ...
Janoary 20 2021
Manambola any Etazonia amin'ny 2021! Ny famatsiam-bola any Etazonia dia mamorona orinasa mpamatsy vola any Etazonia amin'ny 2021
Fampiasam-bola 10 tsara indrindra any Etazonia amin'ny 2021! Te hampiasa vola any Etazonia ianao amin'ny 2021! Ireto ny fampiasam-bola tsara indrindra any Etazonia amin'ny 2021 izay tokony ho fantatry ny mpandraharaha sy ny mpampiasa vola. Nandritra ny folo taona mahery, ny Fidulink.com dia manolotra ny mpanjifany ny serivisin'ireo masoivohony eo an-toerana amin'ny fampidirana ireo orinasa any Etazonia ...
Inona no vaovao amin'ny 2021 ao amin'ny Fidulink.com
ARAHABAINA AMIN'NY 2021 AMIN'NY FIDULINK.COM Tahaka ny faran'ny taona, ny agents Fidulink.com sy ny mpikambana ao amin'ny Network Fidulink.com Incorporation Agent dia milaza aminao izay hiova amin'ny 2021, fa misy ihany koa ireo vokatra vaovao azo amin'ny volana Janoary. 2021 amin'ny sehatra Fidulink.com. Fantatray fa tsy mora ny tamin'ity taona 2020 ity ...
Jereo ny lisitra mainty misy ny hetra any amin'ny Vondrona eropeana
Toy ny isan-taona ny Vondron Eropeana dia mametraka ny lisitra mainty an'ny hetra any an-danitra! Tamin'ny Febroary 2020, toy ny mahazatra dia nandefa lisitra fanjakana vaovao i Eropa izay tsy mifampiresaka firy. Ho an'ity taona 2020 ity dia ireto ny fanjakana 12 izay voasoratra anarana amin'ity lisitra maintin'ny "faritry ny hetra tsy fiaraha-miasa" ity: Fiji ...
Coronavirus sy fety krismasy! Orinasa mpivarotra an-tserasera dia miomana amin'ny vanim-potoana lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra!
Coronavirus na Covid-19 ary izao dia teny iray izay fantatry ny tsirairay tsara daholo! Saingy tsy zava-dratsy fotsiny manodidina io areti-mandringana iraisam-pirenena io. Raha ny filazan'ny kaonty sy ny manam-pahaizana iraisam-pirenena antsika, ny varotra an-tserasera (Internet Shop) dia manolotra fahafaha-manao lehibe sy fivoarana miavaka hatramin'ny ...